Uhlangule abaqeqeshi emlilweni uShalulile ewinisa iSundowns sekuvalwe amehlo - Impempe
Uhlangule abaqeqeshi emlilweni uShalulile ewinisa iSundowns sekuvalwe amehlo
Ubahlangule emlilweni ngomzuzu wokugcina uPeter Shalulile abaqeqeshi bakhe abathathu okungoManqoba Mngqithi, Rulani Mokwena noSteve Komphela, nabateketiswa ngelikaMeshack, Shedrack no-Abednigo.
Laba baqeqeshi bebebukeka sebebheke ekuqopheni irekhodi ngokudlala imidlalo emine ngaphandle kokuwina, kodwa uShalulile wathi ngeke alivume lenzeke lelo hlazo ekhona.
ISundowns, obese kuphele amaviki amathathu ingayazi iwini, iqoqe amaphuzu aphelele emdlalweni weDStv Premiership obuseThohoyandou Stadium ngoLwesithathu ntambama lapho ishaye iqembu lasekhaya, iBlack Leopards.
Ukuwina kweSundowns kufanele ukuthi kubalethele ukukhululeka laba baqeqeshi bayo abathathu njengoba bese kuqala ukubakhubaza emoyeni abanye babalandeli beqembu ukudlala ngokulingana kweqembu labo ababheke lisivikele isicoco seligi.
Ngaphambi kwale wini yangoLwesithathu, iBrazilians ibisidlale ngokulingana emidlalweni emithathu kulandelana. Yabambana neSuperSport United, yalandela ngeBloemfontein Celtic, neyaba nenhlanhla yokuthi unompempe aphike igoli lePhunya Selesele ethi umdlali olishayile wayesesendaweni engamfanele kodwa kungenjalo, kwabe sekuba esifanayo nakwiSwallows.
Lokhu kusho ukuthi iSundowns ilahlekelwe amaphuzu ayisithupha kule midlalo emithathu. Nokho ikulungisile lokho ibuya ngomzuzu wokugcina ihlwitha iLeopards iphuzu elilodwa ebisiligodlile ithi ihamba nalo, yabe isiwawola womathathu yaya nawo eChloorkop.
Emdlalweni wangoLwesithathu, iSundowns iqale kahle futhi uShalile kwale kancane ayibeke phambili kusaphele imizuzu emibili umdlalo uqalile, kodwa ibhola lakhe abeliphaselwe nguKermit Erasmus laphuma phezu kwamapali.
Uphinde wazama futhi ngomzuzu ka-17 uShalulile ukubeka iSundowns phambili, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya futhi ibhola abelingqofile lizishayisa epalini unozinti kade engasenathuba lokulivimba.
NeLidoda Duvha beyingazibekile phansi izama ukuhlasela lezi zimbangi zayo ngokuzumisa kodwa kwaphika ukwenza kwaze kwayiwa ekhefini zisabambene ngo 0-0. Cishe ukubamba iSundowns kuze kuyiwe ekhefini yikho okunike iLeopards umdlandla ngoba ibuye seyilwa ngesiwombe sesibili.
Akuphelanga sikhathi esitheni yabe seyihamba phambili iLidoda Duvha ngegoli lika-Ovidy Karuru alishaye ngomzuzu ka-46. Nokho uShalulile ukwazile ukubuyisa ezakhe emdlalweni ngegoli alishaye ngomzuzu ka-64.
Akuphelanga sikhathi esitheni izinto zabonakale ziyibhimbela kakhulu iSundowns njengoba kuthe ngomzuzu ka-66 uMothobi Mvala wakhishwa ngekhadi elibomvu ngemuva kokudonsa ngejezi uRodney Ramagalela obesezoyobhekana ngqo nonozinti ukube umyekile wadlula.
Cishe iLeopards ibisibalile ukuthi ukuthola iphuzu elilodwa kwiSundowns akufani nokuphuma enkundleni ushwiba izandla ngesikhathi uShalulile eyiphuca iqatha selisemlonyeni. Lo mgadli odabuka eNamibia ushaye igoli ngomzuzu wokugcina.
Umdlalo obekumele ube phakathi kweBloemfontein Celtic neChippa United wona ugcine uyekiwe ngenxa yemvula enamandla evele yayidedela sekuzoqala umdlalo, yagcwalisa inkundla ngamanzi.
Ezakamuva, iDStv Premiershiphttps://impempe.com/ibhola/ubona-ubungozi-kwipirates-ebuya-esibhaxwini-esinzima-uncikazi-we-arrows/
Previous Previous post: Sekulindwe isinqumo sePSL ngokudayiswa kweTTM
Next Next post: Uncome ubuqhawe kuMvala ophume ngekhadi elibomvu uMngqithi weSundowns